Sirdoonka booliska Norway: AL-SHABAAB ka fogaada | WWW.SOMALILAND.NO
Sirdoonka booliska Norway: AL-SHABAAB ka fogaada
Posted on Maarso 8, 2008 by weriye1
Shaki kuma jiro in ururka soomaalidu leedahay ee Al-shabaab uu yahay urur argagixo, ayuu yidhi ninka madaxda u ah sirdoonka booliska Norway ee (PST) Jørn Holme. Wuxuu intaa raaciyey in uu kula talinayo dadka norweyji-soomaaliga ah in ay ka fogaadaan taageerida ururkaa.
Sidii aanu halkan http://www.somaliland.no ku soo werinay, Wiigii hore ayaa waxaa lagu eedeeyey saddex qof oo soomaali dhalasho Norweyji haysta in ay dhaqaale ku taageeraan argagixisadda kadib markii ay ururkaa lacag u direen.
Jaaliyadda soomaalida ah ee Norway ayaa sheegtay in ururka Al-shabaab uu yahay urur dib u xorayn u dagaalamaya, laakiin Holme wuxuu sheegay in habka ay u dagaalamaan xoogdani uu yahay hab aan la ogolaan karahayn.
Wuxuu sheegay in ay hab argagixiso u dagaal galaan oo ay madaafiic iyo naftooda hurayaal is qarxiya isticmaalaan oo ay la beegsadaan dadka shicibka ah. Wuxuu kale oo uu yidhi ” taageerida koox noocaas ahi waxay la mid tahay qof dabni til ah ka qayb qaatay oo kale, sidaa daraadeed buu yidhi looma dul qaadan karo in kooxda caynkaas ah in lacag dadka qaarkood Soomaaliya lacag ugu diraan” Sidaa Jørn Holme wuxuu u sheegay NRK.
Ururka saddexda soomaalida ah lagu eedeeyey in ay lacag u diraan, waxaa uu qirtay in uu weeraro badan ku qaaday meelo dad shicib ahi naftoodii ku waayeen. Sida PST ay sheegeen waxaa kale oo jirta in ururku leeyahay Homepage ay warbixinta waxqabadkooda ku saabsan geliyaan.
Dad badan oo soomaali ah ayaa sheegay in ay taageeraan dagaal xoriyadd doon ah oo lagula jiro gumaysiga Itoobiya. Hogaamiyaha PST wuxuu sheegay in aanay u jeedadoodu ahayn la dagaalan ay la dagaalamayaan xoriyad doonka, laakiin ay daydayayaan argagixiso ay fulisay Al-shabaab. Wuxuu yidhi:
“Maaha in argagixiso lala beegsado dadka shicibka ah, xataa hadii dagaalka la wadaa uu yahay mid xoriyad-doon ah. Ilmo yar oo caruur ahi wuxuu xaq u leehay in uu koro, hadii uu joogo Oslo iyo hadii uu joogo Soomaaliya labadaba. Sidaa daraadeed maaha wax aanu aqbali karno weerar lala beegsado dad shicib ah, halkan aynu joogno iyo meel kale midna”
Waxaa jira in dadka ajaanibka ah ee Norway deggani ay isticmaalaan Wax la yidhaa “Hawala” marka ay dalkoodii lacag u dirayaan. Habkan ayaa ah hab aan Norway ka sharciyeysnayn, laakiin PST waxay sheegeen in aanay u jeedin Xawaaladda xilligan lagu jiro.
Sirdoonka booliiska iyo hoogaamiyahooda ayaa sheegay in ay dareemeen sida ay dareenka bulshadda soomaalid ah ee Norway ay uga bixisay arinta xidhitaanka. Waxaanu sheegay in la fahmi karo cadhada noocaas ah marka cid bulshadda ka mid ah la xidho. Laakiin wuxuu intaa raaciyey in soomaalida Norway deggan badankoodu aanay ahayn qaar taageera Al-shabaab ama koox kale oo argagixiso. Waxaanu intaa raaciyey in ay iska degi doonaan imika marka warbixin badan oo arintan ku saabsani ay soo baxdo.
Warka oo Af-norweyji ah halkan ka akhri!
Filed under: Norge, Norway |
« Abaabul Ciidamo Cusub oo ka bilaabmay Gobolada Sool iyo Sanaag Bari ( Maxay tahay sababtu?) Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti,08 March »